Mangetaheta | NewsMada
Par Taratra sur 19/01/2017
Na eo aza ny famonoana afo nataon’ny minisiteran’ny rano fa tsy ho tapaka izany ny rano eto Antananarivo, noporofoin’ireo daba mavobe nilahatra hatramin’ny misasakalina niandry ny fiteten’ny paompy ny faharitan’ny rano sy fahatapahan-drano ny talata alina nitohy omaly tontolo. Maina Antananarivo. Mangetaheta ny olona. Tsy mandry andro tsy mandry alina mitady rano hosotroina.
Samy mametra-panontaniany ny mety ho anton’izao haintany misy izao ny rehetra. Ny sasany milaza fa sazin’Andriamanitra izao. Ao ireo miteny fa misokatra ny tany any ambany any tamin’ilay horohorontany teo ireny ka nitsika any ny rano…
Ny hany fanazavana omen’ny Meteo dia vokatry ny fahamainan’ny atmosfera no antony tsy mampilatsaka ny orana ka mahamaina ny tany. Tsy mety hionona amin’izany anefa ny sain’ny Malagasy fa mitady antony hafa hatrany.
Tsy ny rano ihany no mampangetaheta ny Malagasy fa zavatra maro. Mangetaheta fahatoniana, mangetaheta fahafahana, mangetaheta fampandrosoana, mangetaheta filaminana sy fandriampahalemana, mangetaheta fahazavana (tsy misy delestazy)….
Maina tanteraka anefa ny andro, tsy misy ny rano. Maina toy izany koa ny fampanantenana ataon’ny fanjakana amin’ny alalan’ny toky fitaka isan-karazany. Maina ny paosy… mai-molotra Atananarivo.
Tsy manana olona hoantenaina. Tsy manana hitarainana fa miforitra anaty, miaina amin’ny zava-misy. Misy ihany ireo efa mitady ho feno ny kapoakany ka te hitroatra kanefa tsy ampy hery fa mbola viza’ny hetaheta.
Tsy mijanona eo ny tebiteby fa manahy ny ho tohin’izao tsy fahampian-drano izao amin’ny mety ho faharatsian’ny vokatra ny rehetra. Tsy ampy rano ny tanimbary, lasa akofa ny vary ary tsy misy azo antenaina firy. Ahina ny krizim-bary atsy ho atsy.Tsy ny vary ihany fa mijaly avokoa, ireo voly fihinana tsy mahazo rano. Zara raha misy ny vokatra araka izany.